Matiu 28 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Greek Greek Sign Language Greenlandic Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Iban Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nhengatu Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rapa Nui Romanian Romanian Sign Language Ronga Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ozi Ọma Matiu Dere 28:1-20
A kpọlitere Jizọs n’ọnwụ (1-10)
A kwụrụ ndị agha ụgwọ ka ha ghaa ụgha (11-15)
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha mee ka ndị ọzọ bụrụ ndị na-eso ụzọ ya (16-20)
28 Mgbe Ụbọchị Izu Ike gachara, n’isi ụtụtụ ụbọchị mbụ n’izu,* Meri Magdalin na Meri nke ọzọ bịara ile ili ahụ.+ 2 Ma, oké ala ọma jijiji mere, n’ihi na mmụọ ozi Jehova* si n’eluigwe gbadata kwapụ nkume ahụ, nọdụkwa n’elu ya.+ 3 Mmụọ ozi ahụ na-egbuke ka àmụ̀mà, uwe ya na-achakwa ọcha ka snoo.+ 4 Ndị nche ahụ mara jijiji, dịkwa ka ndị nwụrụ anwụ n’ihi egwu ha tụrụ ya. 5 Ma mmụọ ozi ahụ gwara ụmụ nwaanyị ahụ, sị: “Unu atụla egwu, n’ihi na ama m na unu na-achọ Jizọs, onye e gburu n’elu osisi.+ 6 Ọ nọghị ebe a, n’ihi na a kpọlitere ya, dị ka o kwuru.+ Bịanụ lee ebe ọ tọgbọbu. 7 Gaakwanụ ọsọ ọsọ kọọrọ ndị na-eso ụzọ ya na a kpọlitela ya n’ọnwụ, n’ihi na o burula unu ụzọ gawa Galili.+ Unu ga-ahụ ya ebe ahụ. Chetakwanụ ihe m gwara unu.”+ 8 N’ihi ya, ha ji egwu na ezigbo aṅụrị hapụ ili* ahụ ọsọ ọsọ, gbara ọsọ gaa ịkọrọ ndị na-eso ụzọ ya.+ 9 Ma, Jizọs zutere ha wee sị: “Ndeewonụ.” Ha abịa jide ya n’ụkwụ, kpọọrọ ya isiala. 10 Jizọs wee sị ha: “Ụjọ atụla unu. Gaanụ kọọrọ ụmụnna m ka ha gaa Galili. Ebe ahụ ka ha ga-ahụ m.” 11 Mgbe ha nọ n’ụzọ, ụfọdụ n’ime ndị nche ahụ+ banyere n’ime obodo kọọrọ ndị isi nchụàjà ihe niile mere. 12 Mgbe ha na ndị okenye zukọrọ ma gbaa izu, ha nyere ndị agha ahụ ọkpụrụkpụ ego* 13 wee sị: “Kwuonụ, sị, ‘Ndị na-eso ụzọ ya bịara n’abalị zuru ya mgbe anyị na-ehi ụra.’+ 14 Unu echegbula onwe unu. Ọ bụrụ na okwu a eruo gọvanọ ntị, anyị ga-akọrọ ya ihe mere.”* 15 N’ihi ya, ha naara ego* ahụ, mee ihe a gwara ha. A gbasakwara okwu a ebe niile n’etiti ndị Juu ruo taa. 16 Ma, mmadụ iri na otu ahụ na-eso ụzọ Jizọs banyere Galili+ gaa n’ugwu ebe Jizọs gwara ha ka ha zukọọ.+ 17 Mgbe ha hụrụ ya, ha kpọọrọ ya isiala. Ma ụfọdụ ekwetaghị na ọ bụ ya. 18 Jizọs wee bịakwute ha, sị ha: “E nyela m ike niile n’eluigwe na n’elu ụwa.+ 19 N’ihi ya, gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m.+ Na-eme ha baptizim+ n’aha Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. 20 Na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu.+ M nọnyekwaara unu ụbọchị niile ruo ọgwụgwụ oge a.”*+
^ Na Grik, “mkpụrụ ego ọlaọcha hiri nne.”
^ Na Grik, “anyị ga-arịọ ya arịrịọ.”
^ Na Grik, “mkpụrụ ego ọlaọcha.”